Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Ee Dalka Somaliland Oo Laga Helay Cudurka Coronavirus – Great Banaadir
Hargeysa (WBW: The GBM) – Waxaa lagu soo waramayaa in Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Ciro) oo ah Guddoomiyaha Xisbiga Wadani ee mucaaradka ka ah Dalka Somaliland, in laga helay Cudurka Coronavirus kadib markii uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
“ALXAMDULILLAAH, calaa kulli xaal, maanta waxa la iga helay Corona Virus (covid 19) baadhis kaddib. Waxa aan ku jiri doonaa karantiin-iskay ah oo toddoba maalmood ah sida dhakhtarku ku taliyey. Caafimaadkayguna aad buu u fiican yahay,” ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Ciro).
Dalka Somaliland ayaa kusoo biiray dalalka madaxbanaan ee dunida kadib markii uu ka baxay Midowgii 1-da Luuliyo ee sanadkii 1960-kii, wuxuuna noqday Jamhuuriyadda Somaliland taariikhda marki ay aheyd 18-dii Maajo, sanadkii 1991-dii.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa wararka kulul ee xiisaha leh.